Computer | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
COMPUTER မှာ RESTART ခဏ ခဏ ကျနေသော ပြသနာ ဖြေရှင်းနည်း
မိမိ Computer မှာ Restart ခဏ ခဏ ကျနေ ပါသလား ဖြေရှင်း ကြရ အောင်ဗျာ..
သည်နည်းလမ်း လေးကို ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ တလုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတုန်းက စာအုပ်လေး တစ်အုပ် တွေ့ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်လေး ထဲက လမ်းညွှန်ချက် လေးတွေကို မှတ်သားပြီး သိမ်းထား ခဲ့တာပါ။ ခုတော့ အများ ဗဟုသုတ ရရှိစေရန် အလို့ငှါ ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
မိမိတို့ရဲ့ Computer တွေမှာ Restart မကြာ ခဏ ကျနေတဲ့ Error မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ Restart ကျတယ် ဆို
တာ ကလည်း ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ Computer ဖွင့် လိုက်တာနဲ့ တက်တက် ချင်းမှာ Windows ဟာ အလိုလိုနဲ့ဘဲ
မတက်တော့ပဲ အဖန် တလဲလဲ Restart ကျကျနေ တာမျိုးလည်း ရှိသလို၊ အသုံးပြု နေရင်း လည်း အချိန် ဘယ်လောက် ကြာတာနဲ့ Restart ကျကျ သွားတတ် ပါတယ်။ နောက် Shut-down လုပ် လိုက်တာကို Shut-down မကျပဲနဲ့ restart ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားတာမျိုး လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို Restart ခဏ ခဏ ကျနေခြင်းဟာ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Restart ခဏခဏ ကျနေတဲ့ အခါ ဖြစ်လာ ရင်တော့ စစ်ဆေးမှု အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် ရပါ လိမ့်မယ်။
( ၁ ) Computer ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ Windows မတက် လာတော့ပဲ Restart ချည်းပဲ ခဏခဏ ကျနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ Windows OS က အရေးကြီးတဲ့ File တစ်ခုခု lost ဖြစ်သွား ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် (သို့) Windows OS က တစ်ခုခု ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နောက် CPU က Overheat ဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ RAM (Memory ) မကောင်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
( ၂ ) CPU က Overheat ဖြစ်နေ ရင်လည်းComputer က Restart ခဏခဏ ကျတတ် ပါတယ်။ CPU တွေက ပုံမှန် အားဖြင့်Temperature 30 လောက် ကနေ နောက်ပိုင်း CPU တွေ မှာတော့ Over 60 Degrees (C) လောက်မှာRun ပါတယ်။)
Temperature က unsafe Level မှာ ရောက်သွားတဲ့ အချိန် Restart ကျကျ သွားတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လစဉ် System Unit ကို ဖွင့်ပြီး CPU အောက်မှာ ရှိတဲ့ Heat Sink ကို သန့်ရှင်းပေး သင့်ပါတယ်။ သူ့ကို သန့်ရှင်း မပေးလို့ ရှိရင် သူကနေ ဖုန်တွေ စုစည်း ထားတဲ့ အခါ လေ စီးဆင်းမှု (Airflow) ကို ထိခိုက် နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လေစီးဆင်းမှု မကောင်းလို့ Heat sink က အအေး မပေးနိုင်တဲ့ အခါ CPU မှာလာပြီး overheat ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် CPU ကို Overheat
မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း ရပါမယ်။
နောက် တစ်ခု အနေနဲ့ မိမိရဲ့ RAM (Memory) ကို အရင် စစ်ဆေးပါ။ Memory က Bad Memory ဖြစ်နေ ရင်လည်း Computer က Restart ခဏခဏ ကျတတ် ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Memory က ပျက်တာ မဟုတ် ဘဲနဲ့ Motherboard မှာရှိတဲ့ RAM Slot က မကောင်း တာလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမ ဦးဆုံး System Unit ကို ဖွင့်ပြီး RAM ကိုဖြုတ် Slot ပြောင်းပြီး တပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒါမှ မရဘူး ဆိုရင်တော့ RAM Slot က မဟုတ်တော့ ပါဘူး။
နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တဲ့ RAM တစ်ချောင်းနဲ့ လဲပြီး စမ်းကြည့်ပါ။ ပြန်ကောင်း သွားပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် RAM အသစ် လဲလို့မှ မကောင်းသေး ဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီး အဖြေရှာ ရပါဦးမယ်။ ၄င်းနောက် ဖြစ်တတ် တာက Windows OS ကတစ်ခုခု ဖြစ်နေလို့ Restart ခဏခဏ ကျနေတယ် ဆိုရင်လည်း နောက်ဆုံး Windows OS ကို Repair လုပ်ရင် လုပ် ၊
ပြန်ပြီး Windows ပြန်တင်ရင် တင် လုပ်ရ ပါတော့မယ်။
အခု ပြထားတဲ့ ပုံတွေ ကတော့ ဖုန်တွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း ကြောင့်လည်း Fan တွေ
ရပ်ပြီး Heat တက်ရင် ကွန်ပျူတာက Restart ဖြစ်တတ် တာကိုး။ Computer ကိုအသုံးပြုနေရင်း ဘယ်နှစ်နာရီကြာရင် Restart ဖြစ်ဖြစ် သွားတာတို့ ၊ Shut down လုပ်တာကို Restart ဖြစ်ဖြစ် သွားတာတို့ ဆိုရင်တော့ အထက်က နည်းတွေကို မလုပ်ခင် Startup and Recovery မှာရှိတဲ့ Automatically Restart ဆိုတာကို Disable လုပ်ပေးရမှာပါ။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်း အတိုင်း လိုက်လံ စမ်းသပ် ကြည့်ပါ။
My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကို နှိပ်ပါ။
အပေါ်က ပုံ အတိုင်း နံပါတ်စဉ် လိုက် ကလစ်ပေး လိုက်ပါ။
အိုကေ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Automatically restart ဆိုတာမှာ အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေး လိုက်ပါနော် ပြီးတာနဲ့ OK ပေး လိုက်ပါ..အဆင်ပြေပါပြီ။
အဲဒါမှ Problem က ဖြေရှင်းလို့ မရသေးဘူး ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ တက်လာလာ ချင်းမှာ F8 Key ကို နှိပ်ထားပါ။ အဲဒီလို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ Advanced Boot Option ကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
Advanced boot option ထဲကမှ Disable automatically restart on system failure ဆိုတာကို ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Windows ကပုံမှန်အတိုင်းပြန် တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါလေး ကတော့ ကျွန်တော် ဖြစ်ဖူးတဲ့ ပြသနာလေးကို လိုက်ရှာဖွေ ရင်း တွေ့ရှိပြီး လိုက်လုပ်တာ အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သည် နည်းလမ်းကို Youth Computer ကနေ တင်ထားတာ တွေ့ဖူးခဲ့တာပါ.. Youth Computer ကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိ ပါကြောင်းနဲ့ သည်လို အခက်ခဲ ပြသနာ ရှိသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ကျွန်တော် ပြန်လည် ဝေမျှပေး လိုက်ခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်..
အားလုံး အဆင်ပြေကြ ပါစေနော်...
ကဏ္ဍ Computer, Window, နည်းပညာ
HyperSnap 8.04.04 (x86/x64)
HyperSnap 8.04.04 (x86/x64) | 23.45 MB
Home Page : http://www.hyperionics.com/
ကဏ္ဍ Computer, Screen-captures, Window
ကွန်ပျူတာ သမားတိုင်း အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Deep Freeze software လေး
ဒီတစ်ခါ ကျနော် တင်ပေးချင် တာလေး ကတော့ ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အတွက် အသုံးဝင် စေမယ့်
နည်းလမ်းလေး တစ်ခုကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ သမား အားလုံး အတွက်တော့ မဟုတ်
ပါဘူး သင်တန်း ဖွင့်ထားတဲ့ သူတွေ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အသုံး ၀င်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့် အတွက် အ
သုံး ၀င်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်...Deep Freeze ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာက data
တွေကို မပျောက် ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းပါ...
Deep Freeze က စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူအလုပ် လုပ်ပုံက ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့ System Restore နဲ့
ဆင်တူပါတယ်။ ပိုပြီး ပါဝါမြင့်ပါတယ်။ Deep Freeze က System File တွေကိုသာမက Data File
တွေကိုပါ Restore လုပ်ပါတယ်။ Deep Freeze က ၀င်းဒိုးစ် ရီစတတ်လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ ဖိုင်တွေအားလုံး
ကို မူလအခြေ အနေပြန်ရောက် သွားစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စက်တလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ဆော့ဝဲအချို့
ကိုဖျက်ပစ်မယ် ... ဖိုင်အချို့ကိုဖျက်ပစ်မယ် ... အဲဒီဖိုင်တွေ ဆော့ဝဲတွေဟာ ၀င်းဒိုးစ်ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါ
ဖိုင်အဟောင်း ဖျက်ပစ် တာတွေ ပြန်ပေါ် လာသလို ဖိုင်အသစ် ထပ်ပြီး သိမ်းထား တာမျိုးကိုလည်း
ခွင့်မပြုပါဘူး။ အသစ်ထပ် ထည့်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေ အားလုံး ရီစတတ် လုပ်အပြီးမှာ ပျောက်သွား ပါ
လိမ့်မယ်။ အသစ် ၀င်ရောက် လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့ အပါ အ၀င်ပေါ့လေ။ အားလုံးပျောက်သွားပါမယ်။
ဆိုတော့ကာ ဒီဆော့ဝဲကို သုံးမယ်ဆိုရင် စက်ထဲ ရှိနေပြီးသား ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်တာတွေ၊ ပြင်ဆင်
တာတွေ လုပ်လို့ မရပါ။ ဖိုင် အသစ်တွေ ထပ်ထည့် တာမျိုး လုပ်ခွင့် မရှိပါ။ တကယ် လို့များ ဖိုင်အ
သစ်တခု ကိုယ်လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်နဲ့ ကူးယူထားမှ အဆင်ပြေပါမယ်။
ရွေးချယ်ခွင့် တခုတော့ ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ စက်မှာ Drive C, Drive D စသဖြင့် ခွဲထားတယ်ဆိုရင်
၀င်းဒိုးစ်နဲ့ ဒရိုင်ဗာတွေ ရှိတဲ့ Drive C ကိုဘဲ ထိန်းချုပ် ထားနိုင် ပါတယ်။ အဲလိုဆို C ကလွဲလို့ အခြား
ဒရိုက်တွေမှာ ကတော့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲခွင့်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် ကတော့ ဒီဆော့ဝဲကို ကျနော့် ကွန်ပြူတာ သင်တန်းခန်း၊ အင်တာနက် ခန်းမှာ သုံးပါတယ်။
အင်တာနက် ခန်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ တွေက တနေကုန် အင်တာနက် တက်တယ်။ အီးမေးလ်တွေ
သုံးနေတယ် ဆိုတော့ကာ မလို အပ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့ လိုမျိုးတွေလည်း ၀င်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ခဏခဏပြန်ပြန် ရှင်းနေ ရတာ အလုပ် တခုဖြစ်နေပြီး အချိန် သိပ်ကုန် ပါတယ်။ အခု
Deep Freeze ကို စက်တိုင်းမှာ ထည့် ထားတော့ အိုကေဘဲ။ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ တခုခု
ဖြစ်ရင် (ဗိုင်းရပ်စ်တို့လို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်တာ ခံရရင်) ရီစတတ် လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အားလုံး အိုကေ။
Deep Freeze ထည့်သွင်းခြင်း
Deep Freeze က MB 30 ကျော်ဘဲ ရှိပါတယ်။ Deep Freeze ထည့်သွင်း ရာမှာ
Program EXE ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး တဆင့်တဆင့်ဆက်သွားလိုက်ရင် Deep Freeze
Adminstrator install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အင်စတောလုပ်တုန်းမှာ ပတ်စ်ဝါဒ်မေးတာရှိပါတယ်။ တခုခုထည့်ပေးပါ။ အဲဒါကို
Start > All Programs > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Deep Freeze
Administrator ကို ဖွင့်ပါ။
Confi guration tab ကိုရွေးပါ။
မြားပြထားတဲ့နေရာကို check လုပ်ပါ။
Password ထည့်ပေးပါ။ (ဒီ ပတ်စ်ဝါဒ်က အရေးကြီးပါတယ်။ မေ့မသွားပါစေနဲ့။)
အချို့သူတွေ အနေနဲ့ Deep Freeze ကို သုံးရာမှာ Drive C တခုတည်း ကိုသာ ထိန်းချုပ် ထားချင်
တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေ ပါတယ်။ အဲလို Drive C ကိုဘဲ ထိန်းချုပ် ထားမယ်ဆိုရင် အခြား
Drive တွေမှာ ဖိုင်တွေ သိမ်း တာတွေ၊ ဖျက် တာတွေ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်
မြားပြထားတဲ့ နေရာက Driver ကိုဖွင့်ပါ။
အောက်က check box တွေမှာ C ကလွဲလို့ ကျန်တာ အားလုံးကို uncheck လုပ်လိုက်
ရင် ok သွားပါမယ်။
Create Programs tab ကိုဖွင့်ပါ။
မြားပြထားတဲ့ ၀က်ဝံ ပုံကို ကလစ်ပါ။ (Workstation create လုပ်ပါမယ်။)
C > Program Files > Faronics > Deep Freeze6Enterprise > Install Programs ဖိုလ်
ဒါရောက် အောင် အဆင့်ဆင့် ဖွင့်သွားပါ။
အဲဒီဖိုလ်ဒါထဲမှာ ရှိတဲ့ DF6Wks ကို ဖွင့်ပါ။
နောက်ထပ်တွေကိုတော့ Install, Next, Finish စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဆက်သွားလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာ စက်က သူ့ဘာသာ သူ restart လုပ်ပါ လိမ့်မယ်။
စက်ပြန် ပွင့်လာပြီး ရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ စက်မှာ DF အလုပ် လုပ်နေပါပြီ။
Start bar ညာဘက် အောက်ဒေါင့်မှာ ၀က်ဝံပုံလေး ပေါ်နေပါမယ်။
ခုချိန်က စပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ စက်မှာ ဘာကိုမှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခွင့် ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တခုခု အပြောင်း အလဲ လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် Deep Freeze ကို ပိတ်ထားပေး ရပါမယ်။
ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ကြည့်ရအောင် ... ။
Ctrl + Alt + Shift + F6 ကို တပြိုင်တည်း နှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ box မှာ create လုပ်စဉ်က ထည့်ထားတဲ့ ပတ်စ်ဝါဒ်ကို ထည့်ပါ။
နောက်ထပ် box မှာ Boot Thawed ကို ရွေးပြီး OK လုပ်ပါ။
စက်ပြန်ပွင့်လာတဲ့ အခါမှာ ၀က်ဝံပုံမှာ ကြက်ခြေခတ် ထားတာတွေ့ရ ပါမယ်။
ဒီချိန်မှာတော့ စက်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တာတွေ လုပ်နိုင် ပါပြီ။
ကိုယ်ပေးထားတဲ့ ပတ်စ်ဝါဒ်ကို ခဏခဏ မေ့တတ်သူတွေ အတွက် one time password ကို
လည်း သိထားဖို့ လိုပါမယ်။ password မေ့သွားရင် မြားပြ ထားတဲ့ နေရာက နံပါတ်ကို မှတ်
ထားပါ။ (အခု ပုံမှာတော့ 0036A300 လို့ပြပါတယ်။ စက်တလုံးနဲ့ တလုံး တူမှာ မဟုတ်ပါ။)
Deep Freeze Administrator ကို ပြန်ဖွင့်ပါ။
One Time Passwords tab ကိုရွေးပါ။
Token နေရာမှာ စောစောက နံပါတ်ကို ထည့်။ Generate ကို ကလစ်။
၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာမှာ ပေါ်လာတဲ့ နံပါတ်ကို သုံးပြီး Deep Feeze ကို Boot Thawed
Deep Freeze ကို Boot Thawed လုပ်ပေးပြီး ၀က်ဝံပုံမှာ ကြက်ခြေခတ် ဖြစ်နေမှ Deep Freeze ကို
Uninstall လုပ်လို့ ရပါမယ်။
Boot Thawed လုပ်ပြီးရင် အောက်က အဆင့်တွေကို ဆက်လုပ်ပေးပါ။
C > Program Files > Faronics > Deep Freeze6Enterprise > Install Programs ဖိုလ်ဒါ ရောက်
အောင် အဆင့်ဆင့် ဖွင့်သွားပါ။
အဲဒီ ဖိုလ်ဒါထဲမှာ ရှိတဲ့ DF6Wks ကို ဖွင့်ပါ။
နောက်ထပ်တွေ ကိုတော့ Uninstall, Next, Finish စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဆက်သွားလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာ စက်က သူ့ဘာသာ သူ restart လုပ် ပါလိမ့်မယ်။ စက်ပြန် ပွင့်လာပြီး ရင်တော့ မိတ်
ဆွေရဲ့ စက်မှာ DF အလုပ် မလုပ်တော့ ပါဘူး။
Start bar ညာဘက် အောက်ဒေါင့်မှာ ၀က်ဝံပုံလေး ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
Download : Deep Freeze Standard : (10) MB
From : ဘလော့ခရီးသည် by Min Oke Kar
ကဏ္ဍ Antivirus, Computer, Security, နည်းပညာ
Craft Edge Sure Cuts A Lot Pro 4.011 | 31.02 MB
Sure Cuts A Lot is an easy to use software to cut your True Type fonts, SVG files, images, and various shapes with various electronic cutting machines, including Craftwell eCraft™, Black Cat Cougar/Lynx™, Boss Kut Gazelle™, Pazzles Inspiration™, Silhouette SD™, USCutter™.
Sure Cuts A Lot4has the same great features of Version2but includes support foravariety of electronic cutting machines.
While version3does not support the Cricut™, it does support the following:
Works with Craftwell eCraft™
Works with Black Cat Cougar/Lynx™
Works with Pazzles Inspiration™
Works with Silhouette SD™
Works with USCutter™
Works with Craft ROBO/Graphtec™ machines including Wishblade™ (Windows Only)
Home Page: http://www.craftedge.com/
ကဏ္ဍ Computer, Editor, Window
AOMEI Partition Assistant Professional & Server & Technician & Unlimited Edition 5.6.2
AOMEI Partition Assistant Professional & Server & Technician & Unlimited Edition 5.6.2 | 41.93 MB
AOMEI Partition Assistant is an easy to use all-in-one Hard Disk Partition Software. It offers various free partition management features for both all home users and commercial users. Hunting for an easy-to-use software to fix hard disk partition problems for Windows OS? AOMEI Partition Assistant Standard is the right one for your PC, guaranteeing you get the full features for creating, resizing, moving, copying, deleting, wiping, aligning, formating, merging, splitting partition and more… AOMEI partition manager enables you to extend the available space on hard disk quickly for improve the capacity for the original partition. The smart migration wizard could easily assist you to migrate OS to another hard disk including SSD and HDD. Built-in step by step wizards realize you to easily finish complex operations including copying partition, cloning entire hard disk. All thanks to the stable partition recovery wizard, the lost and deleted partition is not your problem any more. Creating bootable CD allows you to get access your hard disk even the original OS crashed.
• New! Align partition to boost performance and lifespan of disk.
• New! Change partition type ID and change serial number.
• New! Linux partition management: create, delete, format, wipe, copy, recover Ext2/Ext3 partition, etc.
• New! Migrate OS to SSD or HDD: system migration to solid state drive or hard disk drive.
• New! Make Bootable CD Wizard: manage disk partitions under WinPE 3.0 disk.
• Support Windows 8 (New!), Windows 7, Windows Vista, Windows XP, and Windows 2000 Professional.
• Support Windows Server 2000, 2003, 2008, Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011, and Windows Home Server 2011 (New!).
AOMEI Partition Assistant Standard is free for all users who work on Windows 8/7/Vista/XP (both 32 and 64bit).
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, January 25, 20152comments:
ကဏ္ဍ Computer, Partition-HD, Window
Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.6.0 Final | 69.44 MB
Remote Desktop Manager – isasmall application that is used to manage all your remote (remote) connections. Remote Desktop Manager is compatible with Microsoft Remote Desktop or Terminal Services. The program is an excellent replacement for the Remote Desktops Snap-in.
Home Page : http://remotedesktopmanager.com/
ကဏ္ဍ Computer, Desktop, manager
Sim Aquarium Premium 3.8 Build 61 With Patch Size (38MB)
ဒီဆော့ဝဲ ကတော့ နောက်ဆုံး အသစ် ထွက်ရှိ လာတာပါ ပိုပြီးပြည့်စုံ လာပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင်တော့ desktop ၏ သွင်ပြင်က တကယ့် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်မှာ
ရှိနေတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ခံစား နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
ကဲ ... လန်းချင်သူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
From : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by အောင်ကျော်သူ(ရေကျော်)
ကဏ္ဍ Computer, Desktop, Screen
8GB memory Card ဆိုပြီး ဘာကြောင့် 8GB အပြည့် မပါတာလဲ ???
ကျွန်တော် အခုပြောမယ့် အကြောင်း အရာ ကတော့ တော်တော် များများလဲ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ဘာ အကြောင်းအရာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးလိုလို့ memory stick, hard drive, external
drive စသည်ဖြင့် တစ်ခုခု သွားဝယ်တဲ့ အခါမှာ ကပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်မှာ ကတော့ 8 GB … ကွန်ပျူ
တာမှာ သုံးကြည့်တော့ 7.45 GB … ဟော ပြသနာပဲ ငါ ဝယ်တာ 8 GB ပါ ဘာကြောင့် 7.45 GB
ကြီး ပေးလိုက်တာလဲ။ ငါ့ကိုများ လိမ်ရောင်း လိုက် တာလား။ အဲ့ဒီလို အတွေးမျိုးတွေ တော်တော်
တကယ်တမ်း ကျတော့ ဆိုင်က လိမ်ရောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ကွန်ပျူတာမှာ သုံးတဲ့
အခါ သတ်မှတ် ထားတဲ့ storage ထက် ဘာကြောင့် နည်းနေ သလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။
ဒီအကြောင်းလေး မပြောခင်မှာ computer မှာ storage တွက်ချက်နည်း အခြေခံကို ကနဦးအနေနဲ့
-ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်အဓိက အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါ စာဖတ်သူတွေ မျက်
ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ “A” ဆိုတဲ့ စာလုံး တစ်လုံး စရိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။ ကွန်ပျူတာကြီးက
“A” ကို “A” လို့ မသိပါဘူး ခင်ဗျာ။ သူသိ တာက electronic code ( on / off signals ) လို့ခေါ်တဲ့
Binary code 1 (သို့)0ကိုပဲသိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာထဲကို “A” ဆိုတဲ့ input တစ်ခု
သွင်းလိုက်ရင် 01000001 ဆိုတဲ့ code 8 လုံးပါ အတွဲ တစ်တွဲက memory ထဲမှာ ဝင်ရောက်နေရာ
I 01001001 J 01001010
R 01010010 S 01010011
ထို code 8 လုံးပါ အတွဲ တစ်တွဲကို 8 bit (သို့) 1 byte လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ bytes လေးတွေများ
လာတဲ့အခါ 1024 bytes ကိုရောက်သွားရင် 1 KB(Kilobytes) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ 1024 KB
ကို 1 MB(Megabytes) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ 1024 MB ကို 1 GB(Gigabytes) လို့သတ်မှတ်ပါ
တယ်။ 1024 GB ကို 1 TB(Terabytes) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
8 bit – 1 byte
1024 bytes – 1 KB
1024 KB – 1 MB
1024 MB – 1 GB
1024 GB – 1 TB
ဒီလောက်ဆိုရင် အဓိက အကြောင်းအရာကို ဆက်သွားလို့ ရပါပြီ။
Storage device တွေ ကွန်ပျူတာမှာ သုံးတဲ့ အခါဘာကြောင့် သတ်မှတ် ထားတဲ့ storage ထက်
လျော့နည်းနေ ရသလဲ ဆိုရင် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံက value တွက်ချက် ပုံနဲ့ ကွန်ပျူတာ
က value တွက်ချက်ပုံနဲ့ မတူလို့ပါ။ စက်ရုံက 1 MB (Megabytes) = 1000 KB(Kilobytes) ဆို
ပြီးတွက်ချက်ပါတယ်။ စက်ရုံကတွက်ချက်ပုံ ကလည်း မမှားပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ base
10 စနစ် အရ kilo = 1000, mega = 1000000 ဆိုတာ မှန်ကန်လို့ပါ။ Micorsoft ကသတ်မှတ်
တဲ့ base2စနစ်အရဆိုရင် 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB ဆို ပြီး
24 value ပိုသွားပါတယ်။ မြင်သာ ထင်သာ ရှိအောင် ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ hard drive 500 GB
တစ်လုံးကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင်သုံးမယ်ဆိုရင် missing space ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ
500 GB hard drive (500 x 1000 x 1000 x 1000 = 500000000000 bytes)
500 GB hard drive (500 x 1024 x 1024 x 1024 = 536870912000 bytes)
တွက်ချက်မှု နှစ်ခု ခြားနားချက်
536870912000 bytes - 500000000000 bytes = 36870912000 bytes (34.34 GB)
စာဖတ် သူတို့တွေ့ရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ missing space 34.34 GB တောင် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်
500 GB ပမာဏ ရှိတဲ့ hard drive တစ်လုံးကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင် သုံးမယ်ဆိုရင် 465.
66 GB ရှိကြောင်းသာ မြင်တွေ့ရပါမယ်။
From : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Monster University
ကဏ္ဍ Computer, ကွန်ပြူတာဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး
SIW (System Information for Windows) 2015 5.0.0108 Pro Edition | 5.16 MB
– Software Inventory: Operating System, Installed Software and Hotfixes, Processes, Services, Users, Open Files, System Uptime, Installed —-Codecs, Software Licenses (Product Keys / Serial Numbers / CD Key), Passwords Recovery.
– Hardware Inventory: Motherboard, CPU, Sensors, BIOS, chipset, PCI/AGP, USB and ISA/PnP Devices, Memory, Video Card, Monitor, Disk Drives, – CD/DVD Devices, SCSI Devices, S.M.A.R.T., Ports, Printers.
– Network Tools: MAC Address Changer, Neighborhood Scan, Ping, Trace, Statistics
– Miscellaneous Tools: Eureka! (Reveal lost passwords hidden behind asterisks), Monitor Test, Shutdown / Restart.
– Real-time monitors: CPU, Memory, Page File usage and Network Traffic.
ကဏ္ဍ Computer, manager, System
itsum Technologies Process Lasso Pro 7.6.4.0 Final Multilingual
itsum Technologies Process Lasso Pro 7.6.4.0 Final Multilingual (x86/x64) | 7.92 MB
ကဏ္ဍ Computer, manager, Window
USB Stick ကို ဘာ Software မှ မသုံးပဲ Lock ချမယ်
ကျွန်တော်တို့ Memory Stick ဆိုတာ Portable လုပ်ဆောင်ရတဲ့ Data Transfer တစ်ခုပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ
မိမိက အရေးကြီးသော လုပ်ငန်း Data တွေ၊ Personal Data တွေ လည်း သိမ်းထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို မျိုးအရေးကြီးတဲ့ ဒေတာတွေ အတွက် ကိုယ့်စက် မဟုတ်သော သူများ စက်မှာ သွားထိုးတဲ့ အခါမျိုး၊ မတော်
တဆ ပျောက်ရှသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ အရမ်းကို အရေးကြီးဆုံး အရာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သာမာန် End User အတွေးနဲ့ ပဲတွေးပြီး လုပ်ဆောင်ကြရအောင် ။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က Microsoft Platform မှာပဲ Support လုပ်မှာပါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ၀င်းဒိုးမှာပါတဲ့ Third
Party Utility ကို အသုံးချပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာမို့လို့ပါ။ ကဲ ဆက်လိုက်ရအောင် ...။
အရင်ဆုံး သင် Password ပေးမယ့် USB Stick ကို သင့်ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း သင့် Stick ကို Click ထောက် Right Click နှိပ်ပြီး Turn on BitLocker ဆိုတာကို ရွေးပေး
လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်အောက်ပါ ပုံအတိုင်း
ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ သင်သတ်မှတ် ချင်တဲ့ Password ကို သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့
Save the recovery key toafile ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် အထက်ပါပုံအတိုင်း သင့် Drive အတွက် Recovery Key ကို TXT ဖိုင် အဖြစ်သိမ်းပေး ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ
ကတော့ အကယ်လို့များ သင် Password မေ့သွားတဲ့ အခါမှာ ပြန်ပြီး Recovery လုပ်ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ပြီး
သွားရင်တော့ Save ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ရင်အောက်ပါ ပုံအတိုင်း
ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ Yes ကို ရွေးပေး လိုက်ပါမယ်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့က Next ကိုနှိပ်ပေး လိုက်တဲ့
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် Start Encrypting ကို ရွေးပေးလိုက် ပါမယ်။ ဒီနောက်တော့ သူက
စတင် Encrypting လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ Drive ရဲ့ Size ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါ
အားလုံးပြီး သွားရင်တော့ အထက်ပါ ပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင် Close ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီနောက်တော့ သင့်ရဲ့
Stick က Password ခံထားပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ
အကယ်လို့ သင်ဟာ သူများ ကွန်ပျူတာမှာ သွားထိုးမယ် ဆိုရင် သင့်Stick ကိုမြင်ရမှာက
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သင်က Double Click ဖြင့် ဖွင့်ကြည့်သော အခါမှာတော့ အောက်
Password တောင်းတဲ့ aနရာကိုတွေ့ရပြီး သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Password ကို မှန်ကန်အောင်ရိုက်ထည့်ပြီး
Unlock နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ရဲ့ Drive ကို Computer က စတင် Detected သိမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့် Stick ကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အခါမှာအောက်ပါ ပုံအတိုင်း
ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု မှာချင် တာ ကတော့ Microsoft Platform နဲ့ Linux Platform လုံးဝ မတူညီ သောကြောင့်
အကယ်လို့များ နားလည်တဲ့ သူတစ်ယောက် ယောက်က သင့် BitLocker ကို အသုံးပြု၍ Password ခံထား
သော Stick ကို Linux မှာ ဖွင့်မယ် ဆိုရင်တော့ အထဲက Data တွေအားလုံးကို Access လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Computer, နည်းပညာ